Sababta ay DF u qaadan la’dahay saddexdan tallaabo oo ay ku ciqaabi karto Kenya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sababta ay DF u qaadan la’dahay saddexdan tallaabo oo ay ku ciqaabi...
Sababta ay DF u qaadan la’dahay saddexdan tallaabo oo ay ku ciqaabi karto Kenya
Ciidamada Kenya ee Soomaaliya joogo
Marki mowqofka midowga Afrika ee ku aaddan ciidama Kenya ee joogo Jubbaland sidaas yahay, Midowga Yurub oo dhaqaalahooda bixiyana la aragti yihiin, caydiisa, dhaliishiisa iyo weerarkiisu wuxuu ku dhacyaa Midowga Afrika. Macnaha dowladda Soomaaliya oo eedo usoo jeediso ciidamada Kenya waxay la mid tahay iyadoo eed usoo jeedisay Midowga Afrika. Taasi kama dhigna dowladdu ciidamada Kenya oo xadgudbayo kama hadli karto. way ka hadli kartaa dhaliili kartaa oo waliba dalka ka saari kartaa laakiin waxay u baahantahay caddayn la hubo oo mugdi iyo muran aan gali karin Midowga Afrikana dood la’aan uu ku qanco.
Dadkaas horay u sii joogay iyo kuwa gadaal ka yimidba Kenya waxay galiyeen maalgalin aan caadi ahayn. Wixii la heli karay oo dhan ayaa lagu shubay Kenya. Waa ay yartahay in la helo ruux wax un lacag ah heli karo oo aan Kenya guri ka iibsan. Tuulo yar oo aan daganahay soomaaliduna ku yartahay waxaan ka aqaan dad labaatan dhaafay oo falaatyo Nayroobi ka iibsaday iyagoo wali dibadda ku nool. Malaayiinta soomaaliyeed ee waxay adduunka naxeen Kenya u taal marnaba kama raalli noqonayaan xiriirka Kenya oo la jaro (waxaan idiin xaqiijin in aan anigu shaqsiyan guri iyo kumi kale toona Kenya iga oollin). Dalka sidaasi Soomaalidu isugu aamintay in xariirka loo jaro iyadoo laga maarmi karo ama maslaxo qaran oo muuqataa aysan jirin waa mid is-halligid iyo qar iska tuurnimo ah.
WQ: Ibrahim Aden Shire
Previous articleXulka Qaranka Soomaaliya oo galabta la ciyaaraya Zimbabwe is aragga labaad ee is reeb reebka Koobka Adduunka
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool
Dhageyso:Puntland oo ka hadashay dilka taliyihii Nabadsugida G/Mudug
Kulankii Maanta Muqdisho Ku Dhexmaray Dawlada Dhexe & Dawlad Gobolleedyada Dalka
Sargaal Caan Ka Ahaa Ciidamada Maamulka A.Madoobe Oo Isku Dhiibay Al Shabaab…
Guddiga doorashada Jubbaland oo muddo kordhin ku sameeyay waqtiga diiwaan gelinta Musharaxiinta
Fariinta FAROOLE aan ku fahamsiiyo CC Shakuurow
XOG: DF Oo Lagu Cadaadinayo Iney Go’aan Geesinimo Leh Ka Soo Saartay Tallaabooyinka Guracan Ee Kenya
DAAWO:MD Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Arimaha ay Ka Wadda Hadleen Dawlada imaaraatka
Dhageyso: Hirshabelle oo la Ciidamo u suga Amaanka iyo Xildhibaan Arimo xasaasi ah shaaciyay..